अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श – Page3– Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श (page 3)
वकिलसँग कानूनका कुरा
May 3, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
विश्व सन्देश पत्रिका हरेक हप्ता हेर्ने गर्छु । यो पत्रिकाले लेखेका खबरहरु मलाई मन पर्छ। यसमा पनि मैले वकिलसँगको कुरा सधैं पढ्ने गर्छु । त्यसैले मेरो आफ्ना केही कुरा यही पत्रिकामार्फत रमेशकुमार श्रेष्ठलाई सोध्न मन लाग्यो। कृपया यसको उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। मेरो श्रीमतीले सन् २००८ मा डीभी …
April 27, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
म र मेरो श्रीमान् २०१४ मा अमेरिकामा एफ–१ भिसामा आएका थियौं। नेपाललाई टीपीएस प्राप्त भएपछि दुवैले टीपीएस पनि प्राप्त ग¥यौं। टीपीएस भए तापनि दुवैले मास्टर्स डिग्रीमा एफ–१ मा नै रही अध्ययनरत नै छौं। म एक कम्पनीमा पनि काम गरिरहेको छु। एच–१बी भिसा प्राप्त गर्न गाह्रो भएकाले मेरो बोसले ग्रीनकार्डका लागि …
April 20, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
मैले ग्रीनकार्ड पाएको ४ वर्ष भयो। साथीहरुबाट सुनेअनुसार ५ वर्ष पुग्नुअगाडि नै पनि अमेरिकाको नागरिकताका लागि निवेदन गर्न सकिन्छ अरे, के यो साँचो हो? यदि हो भने कति समयअगाडि निवेदन फायल गर्न सकिन्छ? र, यसको प्रोसेस के छ? – उत्तम, न्यूयोर्क अमेरिकी नागरिकताको विभिन्न रिक्वायरमेन्टहरुमध्ये एक फिजिकल प्रिजेन्स पनि हो …
April 5, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
म युएस सिटिजन हुँ। मैले नेपालमा गएर विवाह गरें। त्यसपश्चात् कुनै वकिलको सहयोगविना आफैंले फेमिली पेटिसन फायल गरें। आई–१३० पेटिसन स्वीकृत भएपछि नेसनल भिसा सेन्टर (एनभीसी)को प्रक्रिया पनि आफैंले पूरा गरी मेरो श्रीमतीको नेपालमा रहेको युएस एम्बेसीमा अन्तरवार्ताको मिति पनि आयो। मेरो श्रीमतीको निश्चित समयमा अन्तरवार्ता भएपछि अमेरिकी कन्सुलेट अफिसले …
March 28, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
हाल मेरो इमिग्रेसन स्टाटस ग्रीनकार्ड होल्डर छ। मैले गत महिना मेरो श्रीमती (जो बी–२ भिजिटर भिसामा छिन्)का लागि आई–१३० पेटिसन फायल गरेको थिएँ। उनको पहिलो श्रीमान्पट्टिका १५ वर्षीय एक छोरा नेपालमा छन्। जसका लागि मेरी श्रीमतीले ग्रीनकार्ड प्राप्त गरेपछि कुनै इमिग्रेसन बेनिफिट वा पेटिसन फायल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? …
March 21, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
म ग्रीनकार्ड होल्डर हुँ। म भर्खरै नेपाल गएर विवाह गरेर आएँ। मेरी श्रीमती पनि यो सेमेस्टरदेखि पढ्न भनी एफ–१ भिसामा आएकी छिन्। मेरो युएस सिटिजनसिप हुनका लागि अझै दुई वर्ष बाँकी छ। साथीहरुबाट सुनेअनुसार सिटिजन भएपछि रिलेटिभ पेटिसन फायल गरे मेरो श्रीमतीको ग्रीनकार्ड छिटो हुने सल्लाह पाएको छु। तर, म …
March 14, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
मेरो दिदी र उसको परिवारका लागि एफ–४ भिसाका लागि पेटिसन पेस गर्ने विचार गरिरहेको छु। उहाँको दुई जना छोरीहरु अहिले वर्ष १६ र १७ की छिन्। कुन उमेरको हदसम्म उनीहरु एच–४ को भिसा निवेदनमा सम्मिलित गर्नका लागि योग्य हुनेछन्? अहिले म अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा गइरहेकी छु। मेरो प्रश्नको …
March 7, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
म अमेरिकामा एफ–१ भिसामा आएको थिएँ। एफ–१ भिसा कायम गर्न नसकेपछि आउट अफ स्टाटसमा बसेको थिएँ। टीपीएस आएप्छि सन् २०१५ देखि टीपीएसमा रही काम गरिरहेको छु। गत डिसेम्बरमा टीपीएस नवीकरणका लागि निवेदन पेस गरें, तर अहिलेसम्म निर्णय आएको छैन। मेरो पुरानो वर्क पर्मिटको म्याद पनि समाप्त भइसक्यो। यो अवस्थामा के …
February 28, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
म गएको वर्ष जुन १७ तारिख अमेरिका हुँ। यहाँ आएपछि मसँग विवाह गर्ने व्यक्तिले विवाह नगर्ने जानकारी दिएका कारणले म सेप्टेम्बर १५ तारिखदेखि ओभर स्टे भएँ। मैले एसाइलमका लागि म्यासाचुसेट्स राज्यबाट निवेदन दिएको छु र मेरो औंलाको छाप लिने कार्य पनि भइसकेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हालै शुरु भएको नीतिले …
February 21, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
मैले आफ्नो बुबाआमालाई फेमिली पेटिसनमार्फत यहाँ ल्याउन लागिरहेको छु। मैले मेरो भाइहरुका लागि पनि युएससीआईएसमा पेटिसन फायल गरिसकेको छु। मेरो कान्छो भाइको उमेर अहिले २० वर्ष मात्र रहेको छ। मैले बुबाआमालाई अमेरिका ल्याउँदा २१ भन्दा कम उमेरको उहाँहरुको सन्तानलाई पनि ल्याउन पाइन्छ भन्ने सुनेको छु। यो साँचो हो भने मैले …